EX - ABSDF: သမိုင်း၏ လစ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရခြင်း နောက်ကွယ်မှာ ဦးနေ၀င်း ပါဝင်ပတ်သက်နေသလား
တိုင်းပြည်ကို ချောက်ထဲဆွဲချပြီး စနစ်ဆိုးကို လက်ဆင့်ကမ်း အမွေပေးခဲ့သူတွေ၊ သူတို့နဲ့ ဆက်နွှယ်သူတွေက ဒီအချိန်မှာ တစ်ကျော့ပြန်ခေါင်းထောင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတာကို တွေ့နေရပါတယ်။
ပြည်သူလူထုက သူတို့ရဲ့ ဆိုးမွေးတွေကို အခုချိန်ထိ ခါးစည်းခံနေ ကြရတုန်းပါ။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့ ဒုက္ခတရားတွေက ပြည်သူလူထုကို ဖိစီးထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သမိုင်းရဲ့ အလှည့်အပြောင်း တစ်ခုအဖြစ် အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖက်တွယ်ပြီး အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် စနစ်ဆိုးကို အသက်သွင်းခဲ့သူတွေ၊ သူတို့နဲ့ ဆက်နွှယ်သူအချို့ဟာ အဖမ်းခံရပြီး နှစ်ရှည်ထောင်ကျခဲ့ပါတယ်။
ထောင်ဒဏ်ရက်မစေ့ဘဲသူ တို့ပြန်လွတ်ချိန်မှာ စကားတစ်ခွန်းကို ကျွန်တော်တို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ‘ခွင့်လွှတ်လို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ မေ့ပစ်ဖို့တော့ မဟုတ်ဘူး’ ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာရှင်တွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် မေ့ပစ်လို့မရတာတွေ ရှိပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာက လူသားချင်းစာနာတဲ့အတွက် ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကျော့ပြန်လာဖို့ အခွင့်အရေးပေးခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်တုန်းက အာဏာရှင်တွေ၊ သူတို့ဆက်နွှယ်နေသူတွေဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ခွင့်လွှတ်မှုကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး နိုင်ငံရေးလောကထဲ တစ်ကျော့ပြန်ဝင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာကို တွေ့နေရပါတယ်။
သူတို့က ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိပါဘူးလို့ ပြောနေပေမဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ‘အမျိုးသားနိုင်ငံရေး’ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ပြောဆိုမှုတွေ ကြားနေရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ခြေလှမ်းတွေအရ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ဘူးဆိုသည့်တိုင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ၀င်မလား၊ မ၀င်ဘူးလားဆိုတာကို တိတိပပ ပြောထားတာ မရှိပါဘူး။
ဒီရက်ပိုင်း သတင်းဂျာနယ် စာမျက်နှာအချို့နဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေမှာ သက်တော်ရှည် အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးနေ၀င်းရဲ့မြေး ဦးအေးနေ၀င်းရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို တွေ့နေရပါတယ်။ ဧရာဝတီ သတင်းဌာနရဲ့ ဖော်ပြချက်မှာ ‘၈၈ အာဏာသိမ်းလုပ်ရပ်ဟာ မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်’ လို့ သူကဆိုတယ်။ ‘စစ်တပ်ဆိုတာ မိုးပေါ်ထောင်မပစ်ဘူး။ တည့်တည့်ပစ်တယ်’ လို့ပြောခဲ့တဲ့ ဦးနေ၀င်းစကားကို သူက ကာကွယ်ပြောဆိုပါတယ်။ လူတွေ အသေအပျောက် မများအောင် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦး အနေနဲ့ သတိပေးတဲ့ စကားလို့ သူကပြောပါတယ်။ သူ့ပြောကြားချက်အားလုံးရဲ့ အနှစ်ချုပ်က ဦးနေ၀င်း လုပ်ခဲ့သမျှ အကောင်းဘက်ကချည်းပဲဆိုတဲ့ ယူဆချက် ဖြစ်ပါတယ်။
မတ်လ ပထမပတ်ထုတ် The Messenger သတင်းဂျာနယ်မှာပါတဲ့ ဦးအေးနေ၀င်း အင်တာဗျူးမှာလည်း ဒီသဘောတရားတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် မတိုင်မီ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်ဟာ တပ်မတော်အစိုးရ လက်ထက်ရော၊ လမ်းစဉ်ပါတီထက်ပါ ပိုဆိုးခဲ့တယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင် လိုလားခဲ့တယ်။ ဦးနေ၀င်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက် အနေနဲ့ လေးစားတဲ့အတွက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီး ဦးနေ၀င်းကိုယ်တိုင်လည်း သက်ဝင်ယုံကြည်လို့ လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဦးအေးနေ၀င်းက ပြောပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ဦးနေ၀င်းဟာ ညီအစ်ကိုဆက်ဆံရေး ရှိခဲ့တယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။ ဒါတွေအပြင် ဦးနေ၀င်းရဲ့ အဆွယ်အပွားတွေ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်၊ ဦးခင်ညွန့်တို့ကိုလည်း ကာကွယ်ပြောဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဦးနေ၀င်းဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို အမှန်တကယ်ပဲ လေးစားခဲ့သလား။ သူတို့ဆက်ဆံရေးဟာ ညီအစ်ကိုဆက်ဆံရေး ရှိခဲ့တာ အမှန်ပဲလား။ ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရမှု နောက်ကွယ်မှာ ဦးနေ၀င်း ပါဝင်ပတ်သက်နေသလားဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ့ သက်ဆိုင်နေပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရမှု နောက်ကွယ်မှာ ဦးနေ၀င်း ပါဝင်ပတ်သက်နေသလားဆိုတာ သမိုင်းလစ်ကွက်တစ်ခုအဖြစ် ရှိနေတုန်းပါ။ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ယူဆချက်များစွာကို ဦးခင်အောင်ရေးသားခဲ့တဲ့ Who Killed Aung San? စာအုပ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အာဇာနည်တွေကို လုပ်ကြံဖို့ ဂဠုန်ဦးစောက စေခိုင်းခဲ့တယ်။ ဒီအတွက် ဂဠုန်ဦးစောနဲ့ အပေါင်းအပါတွေကို ကြိုးပေးကွပ်မျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ လူသိများပြီး တရားဝင်သမိုင်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးစောဟာ ဗိုလ်ချုပ်ကို ဘာကြောင့်လုပ်ကြံခဲ့တာလဲ။ ဦးစောကို ဘယ်သူက စေခိုင်းခဲ့သလဲ ဒါမှမဟုတ် ဦးစောရဲ့ မကျေနပ်ချက်ကို မီးမြှင့်ပေးခဲ့သူက ဘယ်သူလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ရှိနေပါတယ်။
မတ် ၁၆ ရက်ထုတ် လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ်မှာ ‘ဂဠုန်ဦးစောကို ဘယ်သူလုပ်ကြံခဲ့သလဲ’ ဆိုတဲ့ ရေးသားချက်အချို့ကို ပြန်ပြီးဖော်ထုတ် တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၇ ခုနှစ်မှာ ဒေါက်တာကျင်ဟိုးနဲ့ ဦးမြလှိုင်တို့ အမေရိကန်မှာတွေ့ဆုံပြီး မေးမြန်းချက်ကို ရေးသားထားပါ။ အဲဒီမှာပါတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ ဂဠုန်ဦးစောကို လုပ်ကြံဖို့အတွက် ရန်ကုန်ဘဆွေနဲ့ ဦးမြလှိုင်တို့ကို ဦးနေ၀င်းက လျှို့ဝှက်ခိုင်းစေခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို သိတဲ့သူတွေက ဦးနေ၀င်း၊ ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီး၊ ရန်ကုန်ဘဆွေနဲ့ ဦးမြလှိုင်တို့ လေးဦးတည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၄၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်မှာ ဦးစောကို လုပ်ကြံဖို့ သူတို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဦးမြလှိုင်က ကားမောင်းပြီး ရန်ကုန်ဘဆွေက ပစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးစော အသက်မသေခဲ့ပါဘူး။ နဖူးရှပ်ထိဒဏ်ရာ ရခဲ့ပါတယ်။ ဦးမြလှိုင်ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေအရ အသေမပစ်ဘဲ သေရာပါ ဒဏ်ရာရအောင် လုပ်ခဲ့တာပါ။
အဲဒီအချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ဦးစောက မကျေမနပ်ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်ပါ။ နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်တွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဗြိတိသျှတို့ပေးတဲ့ ဒိုမီနီယံကို ဗိုလ်ချုပ်က လုံးဝလက်မခံဘဲ လုံးဝလွတ်လပ်ရေးကို တောင်းပါတယ်။ ဦးစောက ဒိုမီနီယံကို လိုလားပါတယ်။ အောင်ဆန်း-အက်တလီ စာချုပ်မှာလည်း ဦးစောနဲ့ သခင်ဗစိန်တို့က လက်မှတ်မထိုးဘဲ ငြင်းဆန်ခဲ့သူတွေပါ။
နိုင်ငံရေးအရ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အာဃာတတွေ ရှိနေချိန်မှာ သူ့ကိုလုပ်ကြံသူဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပဲ ဖြစ်မယ်လို့ ဦးစောက တစ်ထစ်ချ ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူလုပ်ကြံခံရပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ညပိုင်းဧည့်ခံပွဲတစ်ခုမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကိုလုပ်ကြံဖို့ ကြံစည်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လုပ်ကြံဖို့သွားတဲ့သူက ဧည့်ခံပွဲကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မလာဘူးလို့ လိမ်လည်ခဲ့တာကြောင့် လုပ်ကြံမှု မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၉ လုပ်ကြံမှုမှာ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ အာဇာနည်ကိုးဦး ကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ဦးနေ၀င်းဟာ ရဲဘော်သုံးကျိပ် အဖွဲ့မှာကတည်းက ဆန့်ကျင်ဘက်အုပ်စုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အစေးမကပ်ခဲ့ပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို မရှုစိမ့်သူတွေထဲမှာ ဦးနေ၀င်းလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကို နောက်ပိုင်း သူအာဏာရပြီးချိန်မှာ ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့လာရပါတယ်။
ဦးစောကို ဦးနေ၀င်းက ဘာကြောင့်လုပ်ကြံဖို့ ကြိုးစားခဲ့သလဲဆိုတာ တိတိကျကျ ပြောနိုင်သူ မရှိသေးပါဘူး။ လုပ်ကြံမှုကို ကြံစည်ခဲ့သူ လေးဦးစလုံး ကွယ်လွန်သွားပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ စေခိုင်းခံရတဲ့ ရန်ကုန်ဘဆွေနဲ့ ဦးမြလှိုင်တို့ နှစ်ဦးစလုံးက ဦးနေ၀င်းရဲ့ စေခိုင်းချက်အရ လုပ်တယ်လို့ အခိုင်အမာပြောတဲ့ အထောက်အထားတွေ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
ဦးခင်အောင်ရေးခဲ့တဲ့ Who Killed Aung San? စာအုပ်မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရမှုရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဦးနေ၀င်း ပါဝင်ပတ်သက်နေသလားဆိုတဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေ အချက်အလက်တွေကို ပိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။
လုပ်ကြံမှုမှာ ဦးစောနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြင်သုံးမျိုး ရှိခဲ့တယ်လို့ ဦးခင်အောင်က ဆိုပါတယ်။ ပထမအချက်က လုပ်ကြံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဦးစောကို အဓိကလက်သည်အဖြစ် ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒုတိယအချက်က ဦးစောဟာ ဆင်ကွက်ထဲ ၀င်သွားခဲ့တယ်။ တတိယအချက်က ဦးစောဟာ ဆင်ကွက်ထဲ ၀င်သွားသူလည်း ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း အပြစ်ရှိသူ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးခင်အောင်ပြောခဲ့တဲ့ အမြင်သုံးမျိုးထဲက ပထမအမြင်ကို လူအများစုက လက်ခံထားပြီး သမိုင်းအရ တရားဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးစောဟာ ဆင်ကွက်ထဲ ၀င်သွားတယ်ဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေလည်း အခိုင်အမာ ရှိနေပါတယ်။ ဆင်ကွက်တွေထဲမှာ ဦးနေ၀င်း ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
အမှတ် (၄) ဗမာ့လက်နက်ကိုင်တပ်မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ် (၄) လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဟာ ဦးနေ၀င်းရဲ့တပ်ရင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်လုပ်ကြံခြင်း မခံရခင် သုံးပတ်ကတည်းက သူတို့ကို အရပ်ဝတ်တွေနဲ့ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခိုင်းပြီး ဗိုလ်ချုပ်ရုံးခန်းနဲ့ အတွင်းဝန်ရုံးမှာ တာဝန်ချထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လုပ်ကြံခံရချိန်မှာ အဲဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ရှိမနေပါဘူး။
နောက်တစ်ချက်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် သက်တော်စောင့် တာဝန်ယူခဲ့သူ နှစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလူနှစ်ဦးဟာလည်း ဦးနေ၀င်းက တာဝန်ပေးထားတဲ့သူနှစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲဘော်ဘတုပ်နဲ့ ရဲဘော်ရဲမြင့်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးက ဦးနေ၀င်းရဲ့ လူယုံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးလည်း လုပ်ကြံခံရတဲ့နေ့မှာ ပျောက်နေပါတယ်။ လုပ်ကြံမှုဖြစ်ပြီး ရက်အတန်ကြာမှာ သူတို့ရဲ့ အလောင်းတွေကို ပြန်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကို အလံနီသူပုန်တွေက သတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး အမှုပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ကြံမှုမှာ ဦးစောအပြင် ဘယ်သူတွေပါသလဲဆို အမှုဟောင်းကို ပြန်ဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ နယူးတိုင်းမ်သတင်းစာ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးတင်ထွဋ်လည်း လုပ်ကြံခံခဲ့ရပါပြီး အမှုကိုဖော်ထုတ်သူ မရှိခဲ့ပါဘူး။
တခြားဖြစ်နိုင်စရာ အချက်အလက် များစွာကိုလည်း ဦးခင်အောင်က သူ့စာအုပ်မှာ ရေးသားထားပါသေးတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရမှုရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ မေးခွန်းတွေများစွာ ကျန်ရှိနေပါတယ်။ ဦးစောကို အဓိကလက်သည်အဖြစ် ကွပ်မျက်လိုက်ပေမဲ့ မေးခွန်းတွေက ပျောက်မသွားပါဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရပြီး မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့ပါတယ်။ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီခေတ်ကို ခေတ္တဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ ဦးနေ၀င်းက အာဏာသိမ်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီအချိန် နောက်ပိုင်းစစ်အာဏာရှင်တွေ လက်အောက်ကို မြန်မာနိုင်ငံ ကျရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဦးနေ၀င်းရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပေါ် အခဲမကျေမှုတွေက သူအာဏာရပြီးချိန်တွေမှာ ပိုပြီးပေါ်လွင်လာပါတယ်။
၁၉၆၂ ခုနှစ် အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှာ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့ အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားကို စစ်ဝတ်စုံအပြည့်နဲ့ ချီတက်ဖို့ တပ်မတော်က ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက် အစည်းအဝေး လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အစည်းအဝေးမှာ ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဖေက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သေဆုံးမှုကို ၀မ်းနည်းကြောင်း ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးနေ၀င်းက ထရပ်ခဲ့ပြီး “ဘာလို့ဝမ်းနည်းနေရမှာလဲ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ လူပျော့တစ်ယောက်ပဲ။ ဒါ့အပြင် တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြဿနာတွေအပေါ် သူ့ထက်စာရင် ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာ ငါအများကြီး ပိုသိတယ်” လို့ ပြောခဲ့ကြောင်း ဦးခင်အောင်ရဲ့ စာအုပ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ စစ်ဝတ်စုံအပြည့်နဲ့ ချီတက်မယ့် အစီအစဉ်လည်း ပျက်သွားပါတယ်။
အာဏာရှင်တွေဟာ သူတို့အာဏာရရှိဖို့၊ တည်မြဲဖို့အတွက် နည်းပရိယာယ်နဲ့ ကောက်ကျစ်မှုကို ပေါင်းစပ်ပြီး ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင် ပြီးရောဆိုတဲ့ မက်ခီယာဗယ်လီနည်းကို အမြဲသုံးတတ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရမှုမှာ ဦးနေ၀င်း ပါဝင်ပတ်သက်နေသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းက ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းတွေကို ပြန်လည်ချေပနိုင်သူတွေလည်း မရှိသေးပါဘူး။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဦးနေ၀င်းလုပ်သမျှ ကောင်းကြောင်းအမွှမ်းတင်ပြီး အာဏာရှင်မျိုးဆက် နောက်တစ်ကျော့ထပ်လာမှာကိုတော့ ပြည်သူလူထုက လိုလားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည်များ လုပ်ကြံခံရမှု အပါအ၀င် လွတ်လပ်ရေးမရသေးမီကာလ မြင်ကွင်းအချို့အား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-စာရေးဆရာ ကိုအောင်ဆန်းစာအုပ်နှင့် ဦးခင်အောင်၏ Who killed Aung San မှ)
Written By - နေထွန်းနိုင်